DAAWO: Kooxda Arsenal oo xaqiiqsatay booskeeda wareega sideed dhamaadka kaddib guul soo laabsho leh oo ay ka gaartay kooxda Rennes – Wakaaladda Wararka Hiilnews
DAAWO: Kooxda Arsenal oo xaqiiqsatay booskeeda wareega sideed dhamaadka kaddib guul soo laabsho leh oo ay ka gaartay kooxda Rennes
By admin on 15/03/2019 No Comment
Jimco, Marso, 15, 2019 (HNN)- Kooxda Arsenal oo sameesay soo laabasho cajiib kaddib markii ay garoonkooda 3-0 kaga adkaadeen kooxda Rennes wadarta goolasha ee labada kulan ayaana ah (4-3) Arsenal ayana xaqiiqsatay booskeeda wareega xiga ee sideed dhamaadka .
Kooxda Arsenal ayaa ku soo gashay dar dar xoogan qeebtii koowaad ee ciyaarta waxa ayna la yimaadeen labo gool bilowgii hore ee ciyaartaba .
Daqiiqadii 5-aad ee ciyaarta Aubameyang ayaa daah furay bandhiga goolasha waxaana goolkaas ka caawiyey xidiga reer Weles ee Ramsey .
Kooxda reer Farance ee Rennes ayaa fajac iyo layaab ay ku noqotay markii laga dhaliyey goolkii labaad ee ciyaarta daqaiiqadii 15-aad waxaana goolkaas ka dhaliyey daafaca dambeedka midig ee Matland-Niles kaddib caawin uu ka helay Aubameyang , natiijada ciyaarta ayaana noqotay 2-0.
Qeebtii kowaad ee ciyaarta ayaa lagu kala maray Arsenal oo hogaanka ciyaarta ku heysa labo gool waxaana loo huleelay qolka labiska si ay ciyaartoyda u soo qataan talooyin kulanka ku saabsan .
Nasiino kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta Gunnres ayaa mar kale gaartay shabaqa iyaga oona la yimid goolkii sedsxaad ee ciyaarta waxaana goolkaas dhaliyey Aubameyang daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta .
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay (3-0) Arsenal ayaana sameesay soo laabasho weyn wadarta goolasha labada kulan ayaa ah ( 4-3) Gunners ayaana u gudubtay wareega xiga ee sideed dhamaadka tartanka Eorupe League .
DAAWO: Kooxda Arsenal oo xaqiiqsatay booskeeda wareega sideed dhamaadka kaddib guul soo laabsho leh oo ay ka gaartay kooxda Rennes added by admin on 15/03/2019